Cheshire बिरालो |
Cheshire बिरालो भइरहेको एक स्लट छ5साथ रील 40 paylines. लोकप्रिय उपन्यास एलिस Wonderland मा स्लट को विषय छ. को स्लट को सेटअप एक वन छ र ध्वनि एक सूथिंग छ. ग्राफिक्स बस शानदार र धेरै बोनस यो अचम्मको जादुई साहसिक मा वर्तमान सुविधाहरू खेल थप रोचक बनाउन हो. यो खेल पनि प्ले गर्न सकिन्छ फोन क्यासिनो स्लट.
यो सरल फोन क्यासिनो स्लट पाँच सरल Paylines
यो स्लट एक सट्टेबाजी दायरामा 40p देखि भिन्न कि छ 400 £ प्रति स्पिन. को रील देखिने यो प्रतीक एलिस समावेश, मार्च हरे, को Caterpillar र Cheshire बिरालो पनि खेल कार्ड संग- जे, K, एक र क्यू, केक स्लाइस, र जादुई औषधि.
यो स्लट दिन्छ 12.5 तपाईं भूमि यदि पटक खम्बा5एकल payline मा प्रतीक. सुपर स्ट्याक्ड सुविधा खेलाडी वास्तवमा धेरै लाभ उठाउन सक्छौं जो एक सुविधा छ. यो सुविधा मा, हरेक स्पिन मा एक सुपर स्ट्याक्ड प्रतीक परिणत गर्न ताकि एक प्रतीक अंधाधुंध चुनिएको गरिनेछ.
त्यहाँ एक बोनस सुविधा नाम फ्री Spins बोनस विशेषता कम्तिमा तीन पाङ्ग्रा बोनस प्रतीक रील मा भूमि गर्दा ट्रिगर हुन्छ जो.3तिनीहरूलाई तपाईं पाँच मुक्त spins अवार्ड हुनेछ,4तिनीहरूलाई तपाईं दस मुक्त spins पनि दस पटक कुल खम्बा अवार्ड हुनेछ. तपाईं प्राप्त गर्न पर्याप्त भाग्यमानी हुन बाहिर बारी भने5तिनीहरूलाई को, तपाईं नगद पुरस्कार लायक साथ सम्मानित गरिनेछ बीस मुक्त spins 50 पटक कुल शर्त.
यो सुविधा शुरू अघि, त्यहाँ एक पाङ्ग्रा सुविधा जो रील मा पुरस्कार wilds अंधाधुंध रोजेका हुन् कि जो निःशुल्क spins को शुरुवात अघि प्ले छ. तपाईं पनि प्राप्त गर्न सक्छन्4बाहिर गर्न सक्नुहुन्छ कि जंगली रील अत्यधिक तिर्ने हुन.
त्यहाँ एक न्यूनतम जीत लायक सुनिश्चित गर्दछ कि एक बोनस ग्यारेन्टी सुविधा छ 10 पटक खम्बा. तपाईं कम जीत भने, जितको अप topped हुनेछ. ठूलो विजेता गर्न कुञ्जीले फ्री मा जंगली रील मा आँखा राख्न छ बोनस विशेषता Spins.
कम देखि मध्यम गर्न लिएर विचरण संग, को स्लट खेल सबै मोबाइल बाट उपकरणहरूमा प्ले गर्न सकिँदैन, ट्याब्लेट र डेस्कटप उपकरणहरू. खैर, को फोन क्यासिनो स्लट पनि यो खेल छ. राम्रो अर्केस्ट्रल ट्रयाक पनि पृष्ठभूमिमा खेल्छ गर्दा राम्रो सरल कार्टून डिजाइन खेलाडी लागि राम्रो काम गर्छ. मा आज नै भएको स्लट को रील मारा फोन क्यासिनो स्लट वा अन्य उपकरणहरू उपलब्ध र Cheshire बिरालो लागि हँसिलो आश्चर्य ल्याउन सक्छ.